မေလ 2014 |4၏စာမျက်နှာ 29 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2014 » မေ (စာမျက်နှာ 4)
နယူးယောက်စီးတီးရှိ MTI ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တည်ထောင်ရန်ရောက်ရှိခြင်း
မေီ Hawthorne သင်တန်းနှင့်ထောက်ခံမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်အသစ်သောစစ်ဆင်ရေးဦးဆောင်လမ်းပြရန်။ HOLLYWOODâ "MTI ရုပ်ရှင်ပွဲတော်, နေ့စဉ်သတင်းစာများအပြောင်းအလဲနဲ့, ဒစ်ဂျစ်တယ်ပွနျလညျထူထောငျနှင့်အခြား application များအတွက် software ကိုဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ပြုစုသူ, ကုန်ပစ္စည်းထောက်ပံ့မေီ Hawthorne ၏ဒါရိုက်တာ၏နေရာပြောင်းရွှေ့နှင့်အတူနယူးယော့ခ်စီးတီးရှိတစ်ဦးရှိနေခြင်းထူထောင်ထားပါတယ်€။ Hawthorne In-လူတစ်ဦးသင်တန်း, အထောက်အပံ့နှင့်ဆန္ဒပြပွဲများစဉ်နှင့်အတူနယူးယောက် client နှင့်အလားအလာများကိုပါလိမ့်မယ် ...
Technicolor-PostWorks နယူးယောက်မြို့ကထပ်ပြောသည် Colorist အန်သိုနီ Raffaele
Rising post ကိုခွက်တဆယ်လွတ်လပ်သောရုပ်ရှင်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအတွက်ခိုင်မာတဲ့ခရက်ဒစ်တတ်၏။ colorist အန်သိုနီ Raffaele ပြီးဆုံး NEW YORKâ€ "ရုပ်ရှင်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအခွက်တဆယ် Technicolor-PostWorks '' ကြီးထွားလာတန်းစီဇယားပူးပေါင်းခဲ့သည်။ Deluxe, နယူးယောက်, Raffaele မှာယခင်ကအကြီးတန်း colorist လွတ်လပ်သောရုပ်ရှင်နှင့် Episode ရုပ်မြင်သံကြားများတွင်ကျယ်ပြန့်ခရက်ဒစ်နှင့်အတူရောက်ရှိလာသည်။ သူများအတွက်ဖြစ်သော CBS စီးရီးအပြာရောင်တို့၏အသွေးပေါ်ပြီး colorist အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ် ...
KOBASHOW 2014 ထုပ်ပိုးခြင်းအလှဆင် Up ကို!
KOBASHOW 2014 တစ် BANG နှင့်အတူ၎င်း၏ 24th နှစ်ပတ်လည်ပြပွဲနှင့်ကွန်ဖရမှတ်သား! တောင်ကိုရီးယားနှင့်အသံလွှင့်နည်းပညာ၏ကိုရီးယားအဖွဲ့ချုပ်နှင့်အတူပူးတွဲကျင်းပသည်ဤပြပွဲသည်ဧကန်အမှန်အကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းအသုံးပြုခဲ့မည် State-Of-The-Art နည်းပညာများပြတဲ့အံ့သြဖွယ်မဲပေးသူရှိခဲ့ပါတယ်။ သက်သေခံပစ္စည်းများကိုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထုတ်လွှင့်, ဗီဒီယို, အသံဖိုင်နှင့်အလင်းရောင်ပစ္စည်းကိရိယာများတစ်ဦးဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ Post-ထုတ်လုပ်မှု၏ဧရိယာထဲမှာ ...
KOBA 2014 မှာ Show ကို၏ Harman ရဲ့ Studer Vista က X ကို Console အစတား
Scoop.it အပေါ်ကိုကြည့်ပါ - အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်း Beat, KOBA 2014 တီဗီနည်းပညာ KOBA (ကိုရီးယားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသံလွှင့်, အသံနဲ့အလင်းပစ္စည်းကိရိယာပြရန်) မှာ Show ကို၏နေ့စဉ် EditionHARMAN ရဲ့ Studer Vista က X ကို Console အစတားကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသံလွှင့် industry.See ဘို့တောင်ကိုရီးယားရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟန်ပြဖြစ်ပါသည် www.tvtechnology.com အပေါ်
ကြည့်ရှုသူများသည်၏ 80% Bing-Views ထဲသို့ Are
Scoop.it အပေါ်ကိုကြည့်ပါ - 10,500 နိုင်ငံများမှ 19 စားသုံးသူစစ်တမ်းကောက်ယူရာ Arris မှနောက်ဆုံးစားသုံးသူ Entertainment ကအညွှန်းကိန်းမှထုတ်လွှင့် EngineeringAccording, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစားသုံးသူအများစုယခုမူးရူး-ကြည့်ရှုအချို့ form မှာထိတွေ့ဆက်ဆံ။ အဘယ်ကြောင့်ဒီအကိစ္စ: 80% အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်ရက်ကလုပ်နေတာမှဝန်ခံခဲ့သည်စဉ်, Bing-ကြည့်ရှုသူတို့ရဲ့ဖျော်ဖြေရေးမှဝန်ခံခဲ့သည်စစ်တမ်းကောက်ယူသူတို့၏အမျိုးအအကြမ်းအားဖြင့် 14% ။ များထဲတွင် ...
Scoop.it အပေါ်ကိုကြည့်ပါ - ရေဒီယိုဝင်ရောက်စွက်ဖက် www.scoop.it အပေါ် t.co/Orbar6yRXS)See မတ်စောက်သောဒဏ်ငွေရင်ဆိုင်နေရဖြစ်စေတဲ့အသံလွှင့် EngineeringWoodinville အပတ်စဉ်သတင်း (ဌာနေကိုယ်စားလှယ်
Sonnet ရဲ့: Echo Express ကို III ကို-R နှင့် xMac Pro ကိုဆာဗာ Rackmount Thunderbolt 2-to-PCIe expansion စနစ်များများအတွက် expansion Kit Bundles Now ကိုရရှိနိုင်
Sonnet ရဲ့မိုဘိုင်းသိုလှောင်ဆင် Device ကိုပွုပွငျ 'Kit ငါးနယူးကြိုတင်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ထားသောမော်ဂျူးများလူကြိုက်များသောသိုလှောင်တိုးချဲ့ခြင်းနှင့်မီဒီယာစားသုံးမိ Options ကို Irvine, ကာလီဖိုးနီးယားကယ်ယူ - ။ မေလ 28, 2014 - Sonnet Technologies ကယနေ့: Echo များအတွက်ပစ္စည်းများ (TM) Express ကို III ကို-R ကိုပွုပွငျ' အသစ်ငါးခုမိုဘိုင်းသိုလှောင်ဆင် Device ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာ တစ် 2U rackmount Thunderbolt (TM) 2-to-PCI Express (R) (PCIe (R)) တိုးချဲ့ရေးစနစ်, နှင့်များအတွက်မကြာသေးမီက xMac (TM) Pro ကို Server ကို Thunderbolt ထုတ်ပြန်ကြေညာ ...
MultiDyne 2014 Cine ဂီယာကုန်စည်ပြပွဲပြသခဲ့သည်သတင်းများ
အဆိုပါ 2014 Cine ဂီယာကုန်စည်ပြပွဲမှာ MultiDyne (R) သွားရောက်ကြည့်ရှု - ထို 301 Cine ဂီယာကုန်စည်ပြပွဲမှာ Booth 2014, MultiDyne (R) ဆန်းသစ်, fiber-optic-based ဗီဒီယိုနှင့်အထူးလိုလားသူတစ်ဦးက / V ကိုများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲအသံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကျယ်ပြန့်ပြပါလိမ့်မယ် နှင့် applications များထုတ်လွှင့်။ တဲမှာအဓိကမီးမောင်းထိုးပြဖိုင်ဘာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းချက်၏ MultiDyne SilverBACK (TM) မိသားစုမှဖြည့်စွက်ကြလိမ့်မည်။ စားသုံးသူတုံ့ပြန်ရန် ...